Basaaso BBM Messages Free
On: Feb 26Author: adminCategories: Android, Cell Phone Spy, Tracking Cell Phone, Kormeerka Employee, Ku rakib Mobile Spy, IPhone, iPhone 5 jir Spy Software, Kormeerka Mobile Phone, Mobile Spy, Mobile Spy Online, La soco Isticmaalka Internet-, Control Parental, Spy Facebook Rasuulka, Spy For Android, Spy For iPhone, Spy iMessage, basaas Mobile smartphone, Spy on Wicitaanada, Spy on SMS, Sirdoon ee Skype, Sirdoon Viber, Spy WhatsApp, Track GPS Location No Comments
Haddii aad rabto in aad soo basaasaan on farriimaha BBM iyo waxa aad hiigsaneyso Android ah ama iPhone, ka dibna eegno waxa aad la qaban karto qaado ExactSpy-Spy On BBM Messages Free:
View BBM kulmaya weheliyaan jeer fariin iyo taariikhaha
View sawirada profile iyo magacyada qof kasta oo la kulmaya iyaga la
View sawiro, clips video iyo dhagaysan fariimo cod ah
Note: Waxaad u baahan tahay “Root” android cell phone to track BBM messages.
Waa maxay sababta aad u baahan tahay inaad ExactSpy-Spy On BBM Messages Free.
Ma walwal ku saabsan hawlaha warbaahinta bulshada ayagoo lala ilmahaaga aad la dhacayo oo hurdo ah? Ma wux- waashaan shaqaalahaaga sheekaynta iska waqtiga shirkadda aad?
Handadaad ama isgaarsiinta qarsoodi ah la tartamaya, waxa laga yaabaa in la qaato meel aan ahayn oo keliya telefoon ama fariin qoraal ah, laakiin iyada oo loo marayo BBM sidoo. Waxaad u baahan tahay inaad si buuxda uga war hayaan waxa socda carruurtaada aan qaangaarin iyo shaqaalaha si looga hortago wax kasta oo dhibaato aan loo baahnayn iyaga ama in aad ganacsigaaga soo socda. Taasi waa si hufan sababta aad maalgashadaan ExactSpy in la socota dhamaan BBM warqadihiisa on qalab mobile.
Ma ka shakisan tahay lamaanahaaga la isticmaalayo BBM in discretely isgaadhsiin la yeeshaan ilmahooda lover qarsoodi ah? ExactSpy kuu ogolaanaysaa inaad soo basaasaan on farriimaha ay BBM iyo arko magacyada iyo sawirada qof kasta oo ay la sheekaysatid. Waxaad si dhakhso ah oo si sax ah u kala saari karaa fariimo aan waxba galabsan hanjabaado iman kara sidaas ma noqon doonto in aad la soo dhaafay in la ogaado oo ku saabsan haddii aad la beeniyey. Ka duwan tartamaya badeecada, ExactSpy yaynaan aad u aragto stickers iyo emoticons, oo aad u wargaliyaan markasta oo ay qof kale la wadaagin lala xiriiro ama macluumaadka goobta - faahfaahin kaa caawin doona inaad hesho jawaabaha aad raadineyso weeyna.
BBM Spy Software, bbm tracking, BBM-socod oo app, bbm tracking free, BBM tracking software, Hack bbm messages, Spy on bbm messages, Basaaso BBM Messages Free, View bbm messages online
← Fariimaha basaaso Kik
→ Tagi SMS Free Download Spy